Izindaba - Izixazululo ze-granite ezinemibala ekhanyayo
I-granite enemibala ekhanyayo netshe lokugqwala konke kungama-granite wesakhiwo se-lamellar. Ngaphezu kokumunwa kwamanzi nge-capillary okujwayelekile kwe-granite, ngenxa yombala omhlophe okhanyayo, kuzoba khona indawo yamanzi noma ukungcoliswa komhlaba, futhi umkhondo wamanzi akulula ukunyamalala. Ngaphezu kwalokho, ngenxa yaleli tshe kuphinde kuhambisane nensimbi esebenzayo edwaleni, imvelo emanzi izoholela ekugqolweni. Emkhakheni wokusetshenziswa kwamatshe nobuhlengikazi, sinolwazi oluningi nolunqwabelene, nalokhu okuhlangenwe nakho kwimikhiqizo nobuchwepheshe obuhlobene. Kuyo yonke iminyaka yokwakhiwa komkhiqizo kanye nezinto ezintsha, iSystem System Yethu Yokulungisa isibe ukukhetha okunokwethenjelwa kakhulu embonini ehlobene namatshe eChina nasemhlabeni.
Ukugqwala okuphuzi- Izinto zamatshe ezimhlophe zihlotshaniswa ne-oxide yensimbi ephilayo, endimeni yamanzi iyaqhubeka nokwenza i-oxidize ephuzi, ukusebenza kokugcina endaweni yamatshe ucezu noma ucezu lokugqwala. Amanzi abangela ukugqwala avela emthonjeni ofanayo odala ukugqwala, ngakho-ke kwesinye isikhathi uzobona amanzi futhi uzobona ukugqwala.
Ukungcola- I-substrate emhlophe iyazwela kunoma yikuphi ukungcola, ngakho-ke noma yikuphi ukungcola ketshezi okungena kwifilakisi emhlophe kufanele kususwe ngesikhathi. Okungcolisayo okuvamile kungamabala ombala namabala kawoyela. Kwamanye ama-detergents aqukethe ama-surfactants ukuthi asetshenziswe ngokucophelela, lapho lawa ma-surfactants angena egumbini lamatshe, azokhombisa okufanayo nesimo sokungcola kukawoyela.
Abavikeli abangena ngaphakathi kwe-solvent kufanele bakhethwe. Enkombeni yezobuchwepheshe, hhayi kuphela ukumelana kwamanzi okufanele kube phezulu, isilinganiso sokwehluka phakathi kwenkomba ye-acid ne-alkali ukumelana nenkomba yokumelana namanzi kufanele kube kuncane, ukugwema ngazo zonke izindlela akufanele kuthathe umphumela wamaconsi amanzi njengesisekelo lokwahlulela ukuvikelwa okuhle nokubi.
Ipuleti kumele lomile ngaphambi kokuba kufakwe i-agent evikelayo.
Ukucutshungulwa kokuvikelwa kwe-shop ground hemp emhlophe kufuna izinhlangothi ezi-6 ukuthi zibhekane nazo, kwenziwe ibrashi kabili. Uhlangothi kufanele lupendwe ngokucophelela.
Ngemuva kokuthi i-ejenti evikelayo ifakwe ngaphansi kokushisa okujwayelekile kufanele igcine izinsuku ezintathu ngemuva kwendlela egandayiwe, izinga lokushisa ku-5-15 ℃ lapho isikhathi sokuphulukisa isikhathi esingaphezu kwezinsuku eziyi-7, gwema ukuze uhlangabezane nesikhathi esinqunyiwe sizovele sihlanze ipuleti lomenzeli wokuzivikela ngokushesha umgandayo.
Uhlangothi olungemuva kwebhodi laphansi kufanele luhlanganiswe futhi luqiniswe ukwenzela ithonya le-ejenti evikelayo ekubambeleleni kukasimende.
Indawo yetshe ngemuva kokufakwa kwesitolo ayifuni ukufaka imbondela, ipheripheringi inomoya osondelene nayo, ukufakwa komthungo webhodi esitolo ngemuva kokugcwaliswa kwekhono lamasonto amathathu.
Ukugcinwa kwendawo emhlophe ye-hemp nakho kufanele kunake ukulawulwa kwamanzi, okuncane ngangokunokwenzeka ukukhuhla ngamanzi. Uma kufanele kusetshenziswe amanzi, wahlanze ukuze uvikele amanzi ekungeneleni ngemuva kwebhodi eceleni kwezingodo.
Ukungcola kwendawo ukuhlanzwa kwasendaweni. Izihlanzisi ezifanele i-acidic zinobungozi obuncane kunabahlanza i-alkaline futhi kufanele zixutshulwe ngamanzi ngangokunokwenzeka.
Eminye imisebenzi emhlabathini ukuvikela umhlabathi, njengopende wodonga namanzi engilazi izongcolisa umhlabathi.
Ukukhetha isixazululo esifanele sothuli sokubhekana nomhlabathi, ngaphandle kwalokho kuzongcolisa umhlabathi.